‘राष्ट्रिय चलचित्र कन्फरेन्स’ बिहिबारदेखि सुरु | Samacharpati ‘राष्ट्रिय चलचित्र कन्फरेन्स’ बिहिबारदेखि सुरु – Samacharpati
काठमाडौं, २७ भदौं । मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रको आयोजना नेपालमा पहिलो पटक ‘राष्ट्रिय चलचित्र कन्फरेन्स’ बिहिबारदेखि सुरु भएको छ । तीन दिन सम्म चल्ने कन्फरेन्समा चलचित्र बिकास बोर्डका अध्यक्ष केशब भट्टाईले पानासमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्धघाटन गरेका हुन् । भट्टराईले कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली चलचित्रको यो विचमा थुप्रै परिवर्तन भएको बताए । ‘शीर्जनशील र व्यवसालाई मात्र चलचित्र हो ? सिंगो सिर्जनशीलतमा सबै पर्छन कि पर्दैनन ? यो विषयमा बहस गरिदिनु हहोला । साथै चलचित्र विधेयक सबैले अध्ययन गरी उचित राय दिन आग्रह छ’, उनले भने ।
यो कन्फरेन्सबाट आगमी दिनमा फिल्मको अध्ययन गर्ने विद्याथीहरुको लागि कोर्स अफ स्टडिजमा यो दस्तावेज र उपायोगी कुरामा विस्वास लिएको समेत बताए । काठमाडौं कमलादीस्थित प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा आयोजित कन्फरेन्समा समाजशाशस्त्रिय दृष्टिमा चलचित्र बारेमा बोल्दै राजनितिशास्त्री हरि शर्माले सिनेमा संसारको सुख दुः ख, हर्ष र आनन्द एकै ठाउँमा पाइने बताए । ‘अहिले हात हातमा सिनेमा छ । कन्फाइन्ड स्टेटमा सिनेमा हेर्दा खेरी इमोसन ह्याप्पीनेस एंगरनेश, सबै कुरा महससु गर्न पाइन्छ’, शर्माले भन्छन, ‘ब्ल्यक एण्ड हाइट बाट मल्टि कलर र स्टेरियो भ्वाइस देखि डिजिटल भ्वइस सम्म आउँदा टेक्नोलोजीमा धेरै विकास भएको छ ।’उनले सिनेमाले बदलिदो समाजसँगै सेन्स एण्ड सेन्सीविलिटीलाई कसरी जोड्छ ? भन्ने कुरामा परिवर्तन हुदै आएको बताए । ‘दर्शकको दृष्टिकोणमा सिनेमा के हो ? मनोरञ्ननका लागि बनाउने मान्छे सिनेमालाई कुन विषय वस्तुमा बनाउँछ ? सिनेमाले दर्शकको नारी छाम्न सक्नुपर्छ, शर्माले थपे ।
शर्माकाअनुसार नेपाली सिनेमाले समाजको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । राज्यको लागि सिनेमा पब्लिक प्रोप्रोगाण्ड मात्रै हो । सिनेमाको लागि राज्यले कहिल्यै पनि सहजकर्ताको रुपमा काम गरेन । सिनेमा कसरी आत्मानिर्भर हुन्छ भन्ने कुरा आजको आवश्यकता हो । बस्तुस्थिति अनुसार सिनेमा यथार्थ वादी हुन सक्छ कि सक्दैन ? यो कथा हरु बाट पफ्रेक्ट सिनेमा बनाउन सकिन्छ कि सकिदैन । सिनेमा बनाउनेलले कथा र प्लटको सिर्जना आफै गर्न सक्नु पर्ने उनको दाबी छ । त्यस्तै चलचित्र निर्देशक समाजकी अध्यक्ष सुचित्र श्रेष्ठले व्यवसायिक रुपमा नेपाली चलचित्र सुरुवात भएको ६ दशक भइसको बताइन । अस्करलमा नोमिनेस हुने फिल्म पनि बनेका छन् । तर बौद्धिक बहस हुन सकेको छैन । आफ्नो सिर्जनाको कुरा साटासटा गर्दैनौ । स्क्रिप्टमा नयाँ कुरा ल्याउन सर्जकहरु एकआपसमा बसेर छलफल गर्दैनौ, उनले भनिन् ।
चलचत्रिले बोलेका कुराले समाज परिवर्तन गर्न सक्नु पर्छ भन्ने उनको दावि छ । त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै लोकरञ्ज पराजुलीले नेपाल सिनेमाको कसरी सुरुवात भयो भन्ने बारे चर्चा गरे । अनुभव अजित र उज्वल प्रसाईले नेपाली पञ्चायती सत्ताले राष्टवादको न्यारेटिभिट बनाएको थियो र अहिले पनि त्यो न्यारेटिभबाट भाग्न सकेको छैन भन्दै सयुक्त रुपमा छलफल गरे । त्यस्तै नेपाली नेपाली सिनेमा महिलाहरुको प्रस्तुती करणमा सम्झाना वाग्लेले पञ्चायतकाल, प्रजातान्त्रिकाल ,गणातान्त्रिक कालमा नेपाली सिनेमामा महिला हरुको सहभागीता बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन । नेपाली चलचिमा विविधताको खोजी प्यानल छलफलमा विश्लेषक सोमत घिमिरे, निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल, निर्माता तथा कलाकार दिपकराज गिरी र अभिनेत्री लक्ष्मी वर्देवा सहभागी थिए ।बिहिबार देखि शनिबार सम्म हुने कन्फरेन्समा नेपालमा चलचित्र निर्माण, नेपाली चलचित्रको विभिन्न विषयको चित्रण, तिनको प्रभावबारे अध्येताहरूले लेखेका विभिन्न कार्यपत्रको प्रस्तुति, ती कार्यपत्रमाथि छलफल तथा फिल्म क्षेत्रका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल हुने छ ।
नेपाल भलिबल सङ्घकाे आयोजनामा भलिबल क्लब च्याम्पियनशिप शुक्रबारदेखि